amaxabiso ecango lokutyibilika aluminiyam -- fscyal.com
Ukukhethwa koluhlu kufuneka kusekelwe kubukhulu bomngxuma wefestile kunye nexabiso loxinzelelo lomoya wendawo. Ifestile ye-aluminiyam ye-alloy sliding esetyenziswa njengebalcony evaliweyo ayifanele ibe ngaphantsi 70 uthotho.
Ucango lweAluminium Sliding&window
Changyuan Aluminiyam ingxubevange sliding umnyango&iifestile zenziwe nge-aluminium i-alloy building profiles kunye nesakhelo kunye nesakhiwo sefeni. Bahlulwe ngokweengcango zealluminiyam eziqhelekileyo kunye neefestile kunye nebhulorho eyaphukileyo yeengcango kunye neefestile.. Iifestile zealluminiyam zintle, itywiniwe, kwaye uphakamileyo ngamandla. Zisetyenziswa ngokubanzi kwintsimi yobunjineli bokwakha. Ekuphuculeni ikhaya, Iingcango zealluminiyam kunye neefestile zihlala zisetyenziselwa ukupakisha iibhalcony.. Isakhelo sesash sikhulu kwaye sinokufakwa kwindawo enkulu yeglasi, ukuze ukukhanya kwangaphakathi kukhanye kwaye kukhanye. I-aluminium alloy ngokwayo kulula ukuyikhupha, icandelo lomnqamlezo weprofayili ichanekile, kwaye ukuchaneka kokucubungula kuphezulu. Ke ngoko, abanini abaninzi bakhetha ukusebenzisa iingcango ze-aluminium alloy kunye neefestile kumhombiso. Kukho iintlobo ezimbini zeengcango ze-aluminium alloy sliding kwi-ChangYuan Aluminium: 70 series kunye 90 uthotho. I 70 series ingasetyenziselwa aluminiyam ialloy sliding iingcango endlwini. Inombolo yochungechunge ibonisa inani leemilimitha zobunzima besakhelo socango. Kukho iintlobo ezine ze-aluminium alloy sliding windows: 55 uthotho, 60 uthotho, 70 uthotho, yaye 90 uthotho. Ukukhethwa koluhlu kufuneka kusekelwe kubukhulu bomngxuma wefestile kunye nexabiso loxinzelelo lomoya wendawo. Ifestile ye-aluminiyam ye-alloy sliding esetyenziswa njengebalcony evaliweyo ayifanele ibe ngaphantsi 70 uthotho.
IProfayili yeAluminiyam: Ingxubevange yeAluminiyam: 6063-T5, ikhefu lobushushu, ikhefu elingesoshushu
Ukutyeba: 1.4mm-2.0mm, wena
Unyango lomphezulu: Ngentando yakho (Powder camera / Electrophoresis / Anodizing njl).
Umbala: Mhlophe / Champagne / Ngwevu / iinkozo zomthi // Luhlaza / Isilivere
Uhlobo: (1) Ifestile yeCasement & ucango (2) ukutyibilika kwefestile & ucango
(3) Iwindow esongekileyo & ucango (4) Iwindow yomnyango
(5) Iwindows eguqulweyo & ucango (6) Ukuthambeka&Isilayidi esilayidayo & ucango
(7) Ukuthambeka&Jika ifestile & ucango (8) Umnyango waseFrance
Iglasi: Chwetheza: Low-E / eJonga / wobulali / edadayo / Camera
Injengokubengezela okukodwa: 4/5/6/8/10/12/15/19mm njl
Injengokubengezela kabini: Kucacile, Elaminethiweyo, Phantsi-E, Wobulali
5+12+5mm Clear Glass / 6 + 12 + 6mm Tinted Glass / 5 + 0.76PVC + 5mm Elaminethiweyo Glass
6+12+6mm Ezantsi E Glass / 6mm + 1.14PVB + 6mm + 16A njl
Kathathu 5mm + 9A + 5mm + 9A + 5mm
Isixhobo: 1) Uphawu lwaseTshayina oluphezulu
2) Ibhanti eyaziwayo yaMazwe ngaMazwe
3) I-Flexible evulekileyo kwaye iqinile ngokuqinileyo
Unyango lomphezulu: Ukutyabeka amandla, Ukuhlaziya, Ngaphezulu kwelaminate, Umbane
Ubungakanani: Ngentando yakho
Umbala: Ngentando yakho
Ukutywina: I-Ternary ethylene propylene yokutywina irabha
Ezinye iindawo: Iingcongconi net / Stainless steel screen / Ngaphakathi amakhethini / Grid
Ukusetyenziswa: Izindlu zokuhlala, Iikhondom, Iihotele, Iiofisi, Villa
Ukupakisha: 1. Iphakheji yebhokisi yebhokisi yokuthumela ngaphandle
2. Iipelethi zomthi okanye zentsimbi
3. Ngefilimu ngaphandle
4. Ngentando yakho
Isiqinisekiso: 10 iminyaka
Ukusebenza koxinzelelo lomoya .05.0 kpa GB / T7106-2008 / 9 iklasi
Ukungena komoya 0.5 m3 /(m. H) GB / T7107-2008 / 8 iklasi
Ukungena kwamanzi emvula ≥700 PA GB / T7108-2008 / 6 iklasi
Ukusebenza kwengxolo yomoya 45dB GB / T8485-2008 / 6 iklasi
Ukusebenza kakuhle kwe-Insulation .01.0W /(m2. U-K) I-GB / T8484-2008 / iklasi ye-10
Ukusebenza kweShading .20.2 GB / T2680-2008 / 7 iklasi
ChangYuan aluminiyam sliding umnyango & iingenelo zefestile:
Iifestile ezityibilikayo kunye neengcango zineengenelo ezinje:
1). ungahlali kwindawo yangaphakathi, inkangeleko entle, ixabiso loqoqosho, kunye nokutywinwa okungcono.
2). Yamkela isilayidi somgangatho ophezulu, yityhale ngobunono ukuze ivuleke ngokulula.
3). Idityaniswe neqhekeza elikhulu leglasi, ayinyusi nje ukukhanya kwangaphakathi, kodwa ikwaphucula inkangeleko iyonke yesakhiwo.
4). I-sash inesimo esihle soxinzelelo kwaye ayonakalisi lula
Iingenelo ezibalaseleyo zebhulorho eyaphukileyo ye-aluminium alloy ubushushu iingcango kunye neefestile zinobunzima obulula, amandla aphezulu, amanzi alungileyo kunye noxinzelelo lomoya, ukumelana nomlilo okulungileyo, indawo enkulu yokukhanyisa, ukuxhathisa kwi-corrosion ye-atmospheric, ubomi benkonzo ende, isiphumo esihle sokuhombisa, kunye nokusebenza kakuhle kokusingqongileyo.
Iingcango zeAluminiyam zokuSlayida kunye neefestile zinokugcina indawo engaphezulu yangaphakathi. Inokunyakaza okuncinci eludongeni xa ivula kwaye ivala. Kufanelekile ngakumbi kumagumbi aneendawo ezincinci kunye neengcango ezinqamlekileyo zokwahlula. Iifestile zangaphakathi nazo zifanelekile ngakumbi kwiifestile zokutyibilika.
Isakhiwo eside , indlu, Yonke iflethi okanye indlu ekwicomplex, Indawo yeofisi, kunye nendawo yangaphakathi.
Zonke izinto zealuminium zenziwe ngumzi mveliso wethu, lawula umgangatho kwasekuqaleni.
Yiba nentsebenziswano elungileyo kunye nenye iglasi kunye nezincedisi mveliso
Q1. Ngaba uyinkampani yokurhweba okanye umzi-mveliso?
Siyimveliso yeemveliso ze-aluminium, sineziseko ezimbini zemveliso eTshayina.
Umbuzo: Ngaba unokuthengisa kuphela iprofayile ye-aluminiyam endaweni yeseti yefestile yealuminiyam?
Ewe, singumzi-mveliso weprofayile ye-aluminium nathi.
Umbuzo : Lithini ixesha lokuhlawula?
Siya kwamkela i-TT kuphela. 30%idiphozithi kunye ne 70% ibhalansi ngokuchasene nesidingo sokuhlawula kwangaphambili.
Iimpawu：aluminiyam sliding umnyango, aluminiyam sliding umnyango&window, aluminiyam sliding umnyango&window uMvelisi, aluminiyam sliding umnyango&umthengisi wefestile, ifestile yealuminiyam etyibilikayo, iprofayile yealuminium
emnyango Aluminium ndalunguza&window
Aluminium shutter emnyango&window kunye roller shutter